Onye na -emepụta ihe na ụlọ nrụpụta kacha mma Toonney
Toonney tungsten Carbide plant bụ onye isi na -emepụta ngwaahịa alloy tungsten carbide. Tungsten alloy bụ ụdị alloy nke nwere ụfọdụ ihe ọla, n'etiti nke tungsten bụ isi ihe. N'ime ngwa ọla niile, tungsten nwere ebe mgbaze kacha elu, oke okpomọkụ, ike na nguzogide na -efegharị, conductivity thermal, na arụmọrụ ikuku na -adị mma. A na -eji Tungsten eme ihe n'ọtụtụ ebe iji mepụta carbide ciment na tungsten alloy. A na -eji Tungsten alloy na elektrọnik, ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ, yana na ikuku, mgbatị, ngwa agha, wdg Mgbe nhazi ezi uche dị na ya, enwere ike ịhazi alloy tungsten ka ọ bụrụ ezigbo ihe. Site na mmelite nke tungsten alloy, nzukọ ya, ike ọdụdọ, na plastik - nwere ike ịka mma nke ukwuu.
Okwu Mmalite nke Ịbịaru Ọnwụ
Toonney tungsten Carbide plant bụ onye isi na -emepụta ngwaahịa alloy tungsten carbide. Tungsten alloy bụ ụdị alloy nke nwere ụfọdụ ihe ọla, n'etiti nke tungsten bụ isi ihe. N'ime ngwa ọla niile, tungsten nwere ebe mgbaze kacha elu, oke okpomọkụ, ike na nguzogide na -efegharị, conductivity thermal, na arụmọrụ ikuku na -adị mma. A na -eji Tungsten eme ihe n'ọtụtụ ebe iji mepụta carbide ciment na tungsten alloy. A na -eji Tungsten alloy na elektrọnik, ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ, yana na ikuku, mgbatị, ngwa agha, wdg Mgbe nhazi ezi uche dị na ya, enwere ike ịhazi alloy tungsten ka ọ bụrụ ezigbo ihe. Site na mmelite nke tungsten alloy, nzukọ ya, ike ọdụdọ, na plastik - nwere ike ịka mma nke ukwuu. Toonney tungsten alloy plant na-etinye tungsten alloy dị ọcha maka onye na-emepụta carbide dị elu nwụrụ, nkenke anwụ na ịse ọnwụ. N'ihi nke a, Toonney tungsten alloy plant na -enweta nkwado na ndị ahịa na ụfọdụ nzukọ mba ofesi. Toonney tungsten alloy plant dị na Xiamen nke dị n'ụsọ osimiri, mpaghara Fujian nke China. Toonney tungsten alloy na -ekpuchi ihe dịka 8000M2 kpamkpam na ala 3, na osisi Toonney tungsten alloy nwere ahịrị mmepụta kachasị ọhụrụ iji nweta ụdị/imecha tungsten carbide alloy rods/die/bar from tungsten carbide powder.
Ịbịaru ịnwụ na -ezokarị aka n'ụdị njikwa waya dị iche iche, yana ịse foto eriri anya na -anwụ. Ebe etiti nke ịse ihe niile nwere oghere udi, dị ka okirikiri, square, octagon, ma ọ bụ ụdị pụrụ iche ndị ọzọ, nha igwe ga -adị ntakịrị mgbe adọtara ya n'ime oghere ịnwụ. Oge ụfọdụ ụdịdị ahụ ga -agbanwe. A na -eji ịse ihe anwụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, dị ka elektrọnik, radar, TV, akụrụngwa, na ụlọ ọrụ na -ahụ maka ohere mbara igwe. Ịbịaru anwụ bụ nnukwu ihe eji ere ọkụ maka ụdị igwe na -emepụta waya niile, dị ka ụlọ ọrụ waya na eriri, ọrụ waya, ụlọ ọrụ waya na ihe ndị ọzọ. Ọnwụ ọnyà waya nwere ọtụtụ ngwa, ọkachasị maka mmanya ịse, mkpanaka waya, waya, ọkpọkọ na ahịrị ndị ọzọ siri ike ịhazi. Drawing die dabara na nhazi ígwè, ọla kọpa, tungsten, molybdenum, na tungsten alloy material. Ọnụ ego ịse foto nwụrụ ihe dịka 1/2 nke ọnụ ahịa ịse ihe waya. Ya mere, otu esi ebelata ọnụ ahịa ịbịaru ịnwụ na imeziwanye ndụ ọrụ nke ịnwụ anwụ bụ nsogbu dị ngwa ngwa idozi. Osisi Toonney nwụrụ anwụ ewepụtala oghere tungsten carbide dị elu maka ụlọ nrụpụta waya na-anwụ anwụ ma mechaa tungsten carbide ịbịaru ọnwụ nwere ike ịdị na Toonney.
Toonney carbide nwụrụ onye nrụpụta ọkachamara na carbide nwụrụ na -echepụta ma na -emepụta ihe karịrị afọ ise. Carbide nwụrụ na -arụ ọrụ ma nwụọ anwụrụ carbide nke Toonney carbide nwụrụ na -emepụta nwere ike siri ike, ike dị elu, nguzogide corrosion, iguzogide oke okpomọkụ na ọnụọgụ ọnụọgụ dị ala. Ndụ ndụ nke carbide nwụrụ ogologo oge karịa ndụ ọrụ nke nchara nwụrụ. Toonney carbide nwụrụ onye nrụpụta dị njikere ịnye nkọwa ndị ọzọ gbasara carbide nwụrụ. Nabata na onye nrụpụta carbide Toonney nwụrụ.
Ndụ ọrụ nke ịnwụ anwụ bụ nnukwu ihe mgbochi ịkwalite nkwalite teknụzụ ọhụrụ nke ezigbo iberibe. Otu n'ime isi ihe kpatara ya bụ na ihe nkenke anwụ anwụ adịghị mma na usoro ọgwụgwọ ọkụ ezughị oke. Toonney nkenke osisi nwụrụ anwụ na -etinye onwe ya n'ịmụ ọnọdụ ọnọdụ ziri ezi ugbu a n'ụlọ na mba ofesi. Ịmụta site na ahụmịhe dị elu nke ndị mba ọzọ, ọkachasị ahụmịhe nke Switzerland Feintool AG Lyss nkenke nwụrụ anwụ, Toonney ewepụtala tungsten carbide grades RKG, XK, RVA, RST, G usoro tungsten carbide maka ịbịaru ịse foto dị iche iche, họrọ akara ule kacha dabara maka gị ojiji pụrụ iche ga -enyere gị aka inweta arụmọrụ kachasị mma ma mee ka ogologo oge ịsere anwụ dị ogologo. Ewezuga mmepe usoro nke ihe carbide tungsten, Toonney na-agbatịkwa ndụ nke ịnwụ site na ngagharị pụrụ iche dị ka HIP na-agbada nke ọma iji nweta ike ike nke carbide nwụrụ.
N'otu okwu, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nkenke Toonney na -enweta ezigbo ngwọta maka nhọrọ ihe yana ọgwụgwọ ọkụ nke nkenke anwụ anwụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ọtụtụ ihe gbasara nkenke ọnwụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị!
Ihe nlele dị mkpa: ịbịaru anwụ, carbide nwụrụ na nkenke anwụ nke nwere ike ịnweta site na ngwa ahịa anyị na -emekarị, enwere ike ịnye ya dị ka ihe nlele n'efu. Maka ụfọdụ ịnwụ anwụ, carbide nwụrụ na nkenke nwụrụ na ndị ahịa pụrụ iche chọrọ, ga -akwụ ụgwọ. N'ezie, ndị ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ mbupu. Ọtụtụ mgbe, oge nlele nke ihe nlele ga -adị n'ime ụbọchị ọrụ 7.
Onu ogugu kacha nta:Enweghi ọnụ ọgụgụ kacha nta nke ịbịaru ịnwụ, carbide nwụrụ na nkenke nwụrụ maka usoro ikpe izizi. Mana n'usoro nke abụọ, ngụkọta ego nke ịse anwụrụ, carbide nwụrụ na nkenke anwụ ekwesịghị ịbụ ihe na -erughị 1000 USD.
Nkọwapụta nke ịbịaru Die
Onye nrụpụta Tonney Carbide nwụrụ nwere ike ịnabata ngwaahịa tungsten ahaziri iche.
Njirimara ịbịaru Die
Product aha: Ịbịaru die/ nkenke anwụ/ Carbide Nwụrụ
Nọmba nlereanya: DI
Ụdị: Ịbịaru die/ nkenke anwụ/ Carbide Nwụrụ
Ihe: Tungsten alloy
Ọkwa: GA10, RKG2, RKG3, RKG4
Nkọwapụta Ngwa nke ịbịaru Die
Nkenke GA10 nwụrụ (njupụta nke ihe alloy tungsten: 14.4; HRA nke ihe alloy tungsten: 92)
Enwere ike itinye ụdị nkenke anwụ a maka ịnwụ isi dị ka nnukwu dia. ịbịaru bube nwụrụ, ịkpụ ntụ na -anwụ, nut na bolt anwụ.
RKG2 nkenke nwụrụ (njupụta nke ihe alloy tungsten: 14.93; HRA nke ihe tungsten alloy: 90.2)
RKG3 nkenke anwụ (njupụta nke ihe alloy tungsten: 14.61; HRA nke ihe tungsten alloy: 89.3)
RKG4 nkenke anwụ (njupụta nke ihe alloy tungsten: 14.31; HRA nke ihe tungsten alloy: 89.2)
Enwere ike itinye ụdị nkenke anwụ a na ọnwụ nwụrụ anwụ dị ka nnukwu dia. ịbịaru bube nwụrụ, ịkpụ ntụ na -anwụ, nut na bolt anwụ.
Uru nke ịbịaru Die
Toonney tungsten carbide plant na-eji ihe alloy tungsten alloy dị elu mepụta imepụta ọnwụ, carbide nwụrụ na ihe ndị ọzọ.
Toonney ịse ụlọ ọrụ nwere ahụmịhe mmepụta ihe karịrị afọ 10 na ndị otu ọkachamara maka ịchepụta.
Toonney carbide nwụrụ onye nrụpụta na -etinyekwu nlebara anya iji melite ikike ngwaahịa ha. Toonney carbide nwụrụ ụlọ ọrụ na -eji akụrụngwa kachasị elu.
Toonney ịse ụlọ ọrụ nwere ike ịnabata usoro ịbịaru ịnwụ, carbide nwụrụ, nkenke anwụ na ihe ndị ọzọ.
Toonney carbide nwụrụ onye na-emepụta ihe na-etinye alloy tungsten dị elu nke nwere nguzogide dị mma, ike siri ike, na mmetụta ike.
Nke gara aga: Oghere Carbide
Osote: Isi Ọnwụ